‘एमाले बन्नु भनेकै मुलुक बन्नु हो’ « Yo Bela
‘एमाले बन्नु भनेकै मुलुक बन्नु हो’
घनश्याम भुसाल,उपमहासचिव नेकपा (एमाले)
संगठित एमाले हुन धेरै समय लाग्यो । हिजोका दिनमा हामी कोही कता थियौं, कोही कता । आज एमालेको छातामुनी गोलबद्ध छौं । अझ गोलबद्ध हुनेक्रम जारी छ, रहिरहन्छ । एमालेलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौं भने मुलुक चलाउन एमाले पर्याप्त छ । हामीभित्र कमजोरी छन् भने हामीले त्यो काम गर्न सक्दैनौं । इतिहासका शिक्षा र कमजोरीबाट सिक्दै एमाले अघि बढ्नुको विकल्प छैन । रुपान्तरणको आन्दोलनप्रति सबैको प्रतिवद्धता हुनुपर्छ, त्यो ममा पनि हुनुपर्छ । पद गौण कुरा हो । यसको अर्थ पद नै राख्नु हुन्न भन्ने होइन । तर सबैलाई पदमा राख्न पनि सकिदैन । पदमा रहेर वा नरहेर देश र जनताको पक्षमा कटिवद्ध भएर काम गर्न सकिन्छ ।
एमालेको नेता हुनका लागि के योग्यता चाहिन्छ ? त्यो मापदण्ड बनाऔं । त्यो मापदण्डमा पर्ने स्वतः नेता हुने विधि बस्छ । महाधिवेशनबाट हामीले दिनसक्ने एउटा सन्देश यो पनि हो । यसले पार्टीलाई बढी लोकतान्त्रिक बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । के हामी त्यसो गर्न तयार छौं ? तर तयार हुनैपर्छ । एउटा मापदण्ड नहुने हो भने पार्टीभित्र पदका लागि झमेला जहिले रहिरहन्छ । र यो झमेलाले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक होइन अलोकतान्त्रिक बनाउँछ । हामी सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले हाम्रो अगाडि दशौं महाधिवेशन आइसक्यो । महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न लाग्नुछ । महाधिवेशनबाट साँच्चै एकतावद्ध एमालेको सन्देश दिनुपर्छ । यही आजको आवश्यकता हो ।
स्थानीय तहको चुनावप्रति गठबन्धन सरकार किन त्रसित ? : आनन्द पोखरेल